I-Semalt - Amathiphu Aphumelelayo Kanjani Ukuhlunga I-Google Analytics Spam
Abahlaseli bebelokhu basebenzayo ezindleleni zokungena kuwebhusayithi yakho emva kokuba kusetshenziswe amasu asebenzayo ukuze abavimbe. Namuhla, ama-opportunists asebenzisa ukuthungatha okukhohlisayo, ne-Google Analytics ogaxekile ngenhloso eyodwa yokuqondisa abasebenzisi kumawebhusayithi we-spammy. Ukuvula izikhala zokudluliselwa ngemilayezo engamanga kungacasula kakhulu.
Emasontweni ambalwa adlulile, abaduni bebelokhu bethumela ukugaxekile kogaxekile kubasebenzisi ngenhloso yokulahla idatha yamakhasimende nokudala ithrafikhi kumawebhusayithi angalungile. Ngemuva kokuchofoza ukugaxeka kokudlulisa amanga, abasebenzisi baqondiswa kabusha kuwebhusayithi enonya enequkethe ne-malware. Igciwane leThrojani liye lasetshenziswa kakhulu ngabalingani ukuze bahlanganyele ukugaxeka kokudlulisela okuphelela ekuqondiseni kabusha amaklayenti ama-malware kanye nezitolo ezinonya eziku-intanethi.
UMichael Brown, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , inikeza izinkinga eziphoqelekile ukukusiza ukuqeda ugaxekile wokudluliselwa.
Umthelela We-Google Analytics Spam
Izikhalazo zokudluliselwa zivame ukungcola ngendlela amawebhusayithi amancane asebenza ngayo, cishe emininingwaneni yabo uma kuqhathaniswa namawebhusayithi amakhulu. Ngemva kokulawula ithrafikhi yakho, abakwa-spammers basebenzisa amakhasimende ahambela iwebhusayithi ngokuwaqondisa kumasayithi e-malware. Ngokusho kochwepheshe be-IT, ithrekhi engaphezu kwezingu-50% ijwayele ukuqondiswa kabusha kogaxekile kumasayithi we-malware, isimo esithinta ikakhulukazi inqubo encane yewebhu ye-intanethi.
Ngamazwi alula, iwebhusayithi ehlushwa igciwane leThrojani igcina ukwabelana ngezikhala zokudlulisa kabanzi, isimo esonakalisa isizukulwane sedatha yedatha kanye nokusebenzisana kwabasebenzisi. Ukudluliselwa kwenkohliso ne-Google Analytics spam ayithinti kabi ukuhlaselwa isilinganiso samawebhusayithi.
Indlela Yokuhlunga Ugaxekile Wokuxhumano Inkohliso
Ukuba nesifiso lapho upheqa nokuchofoza ukudluliselwa kuyadingeka okudingekayo uma kuziwa ekuthengiseni inthanethi. Kunamasu amaningi asetshenziselwe ukuhlunga ugaxekile wokudlulisela amanga, iTransfer virus, kanye ne-malware ethinta ukuthi amawebhusayithi asebenza kanjani.
Isigaxekile sokungabonakali nge-Ghost
Ugaxekile wokudluliselwa kweghost olungapheli kuvame ukuvakashela amawebhusayithi abasebenzisi bokugcina futhi ulawula ukukhiqiza komgwaqo ngokuhamba kwesikhathi. Ukuze ususe zonke izinhlu zogaxekile zokudlulisela okungeyona ghost, yakha isihlungi sokukhipha konke ukugaxekile kogaxekile okuvela esizindeni esaziwayo. I-Megalytic yi-spam yokudluliselwa okungaziwa ejwayelekile. Ukuze ube nesithombe esicacile se-spam yokudlulisela ukuthunyelwa kwe-spam evakashela iwebhusayithi yakho, iya ku-Acquisition bese uchofoza ku-'Yonke I-Traffic '. Vula ama-Referrals bese wengeza igama lomsingisi elivame ukusebenza njengesibili.
Ugaxekile Wokudluliselwa Kwemoya
Ukudluliselwa kwe-Ghost kuvela emibikweni yakho yewebhu ngokuvakashelwa kwe-malware. Lapha, ukudluliselwa kweghost kuyasebenza ukuze kudlulise idatha engalungile neyingozi ku-Google Analytics. Ekuhambeni kwesikhathi, idatha yedluliswa yenkohliso ifakwe embikweni wakho. Ukuqeda ugaxekile wokudluliselwa komzimba kusuka kumbiko wakho, yakha ubukhulu obusha, bese ufaka izihlungi ezizokhipha wonke ugaxekile wokudlulisa okuvela embikweni wakho.
Ezweni le-Google Analytics, ukuxhunyelwa kogaxekile kuba yinkinga lapho kuthinta khona imibiko yewebhusayithi. Amasu namathuluzi amaningana akhiwa yi-Google ukuhlunga ukuxhunyelwa kogaxekile. Ngaphambi kokuchofoza noma yikuphi ukuhanjiswa, abasebenzisi bokugcina bayelulekwa ukuba baqaphe futhi bahlole ukufaneleka kokudluliselwa. Amasu okuhlunga okukhulunywe ngenhla azokusiza ukuthi uvimbele futhi ususe i-malware njengegciwane le-trojan kanye ne-spam yokudluliselwa kusuka kuwebhusayithi yakho.